Wararka - Isbarbardhigga sifooyinka waxqabadka, faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka saddexda kombaresarada hawada: kombaresarada hawada centrifugal, iyo kombaresarada piston oo is-beddelaysa
1. kombaresarada fur
Kombaresarada hawada nooca maroojin. kombaresarada hawada ee saliida lagu duray waxaa loo isticmaalaa aaladaha qaboojiyaha. Sababtoo ah qaab-dhismeedkooda fudud iyo qaybo yar oo xiran, waxay yeelan karaan heerkulka qiiqa hooseeya ee xaaladaha shaqada oo leh kala duwanaansho cadaadis weyn ama saamiga cadaadiska, waxayna siiyaan qadar badan oo saliid ah qaboojiyaha. Saliid (badanaa loo yaqaan istaroog qoyan) maaha mid xasaasi ah oo waxay leedahay nidaaminta socodka hawada wanaagsan. Waxay si dhakhso ah u qabsatay codsiyada kala duwan ee kombaresarada dib-u-celinta awoodda-weyn, waxayna sii waday ilaa xadka dhexdhexaadka ah, waxaana si ballaaran loo isticmaalay kaydinta qaboojinta iyo qaboojinta. , Qaboojiyaha iyo farsamada kiimikada iyo qalabka kale ee qaboojinta.
2. Centrifugal kombaresarada
Kombaresarada centrifugal waa kombaresarada wareega ee vane (taas oo ah, kombaresarada turbo). In kombaresarada centrifugal ah, xoogga centrifugal ah oo la siiyo gaaska by xawaaraha-xawaaraha sare impeller iyo saamaynta diffuser la siiyo gaaska ku jira kanaalka diffuser kordhiyo cadaadiska gaaska. Maalmihii hore, sababtoo ah kombaresaradani waxay ku habboon tahay oo kaliya hoos u dhaca, cadaadiska dhexdhexaadka ah iyo munaasabadaha qulqulka weyn, dadku ma dareemin. Iyada oo ay ugu wacan tahay horumarinta warshadaha kiimikada iyo samaynta warshado iyo warshado kiimikaad oo waaweyn oo kala duwan, kombaresarada centrifugal waxay noqdeen mishiin muhiim ah oo lagu cadaadiyo oo lagu qaado gaasaska kala duwan ee wax soo saarka kiimikada, waxayna ku jiraan boos aad u muhiim ah. Guulihii laga gaaray cilmi baarista dhaq-dhaqaaqa gaaska, hufnaanta kombaresarada centrifugal ayaa si joogto ah loo hagaajiyay, iyo
Sababo la xiriira horumarinta guul teknoolajiyada muhiimka ah sida shaabadeynta cadaadiska sare, socodka yar yar iyo processing impeller cidhiidhi ah, iyo saliid multi-saliid xadhkaha, waxay xallisay dhibaatooyin taxane ah ee horumarinta kombaresarada centrifugal in cadaadis sare iyo kala duwanaanshaha socodka ballaaran, samaynta. kala duwan ee codsiga ee kombaresarada centrifugal ballaarinta ballaaran, si ay u bedeli kartaa kombaresarada soo noqnoqda marar badan, oo si weyn u ballaariyo baaxadda codsiga.
3. kombaresarada piston-ka oo is-beddelaysa
Waa mid ka mid ah noocyada ugu horreeya ee kombaresarada. Compressors Piston waxay leeyihiin taariikh dheer oo la isticmaali jiray waxayna hadda yihiin kombaresarada ugu badan ee la isticmaalo. Sababtoo ah kala duwanaanta cadaadiska ballaaran, waxay la qabsan kartaa tamar ballaaran, waxayna leedahay faa'iidooyinka xawaaraha sare, dhululubada badan, tamarta la hagaajin karo, waxtarka kuleylka sare, oo ku habboon xaaladaha shaqada ee kala duwan; faa'iido darrooyinkeedu waa qaab-dhismeed adag, qaybo badan oo nugul, iyo wareegga dayactirka gaaban, Dareenka istaroogga qoyan, gariir firfircoon, xasilloonida socodka liidata.
Kombaresarada Screw waa qalab cadaadis cusub, kaas oo la barbar dhigo nooca is-celinta:
①Mashiinku wuxuu leeyahay qaab dhismeed is haysta, mug yar, meel sagxad yar iyo miisaan fudud.
② Hufnaanta kulaylka sare, qaybo mashiinada oo yar, iyo tirada guud ee qaybaha kombaresarada waa 1/10 oo kaliya ee nooca piston ah. Mashiinku waxa uu leeyahay qaybo yar oo xidhan, hawlgal badbaado leh oo la isku halayn karo, iyo hawl fudud iyo dayactir.
③Gaasku malaha garaaca wadnaha, hawlgalkuna waa mid deggan. Unuggu wuxuu leeyahay aasaas hoose oo looma baahna aasaas gaar ah.
④ Saliid ku duri daloolka rotorka inta lagu jiro hawlgalka, markaa heerkulka qiiqu wuu hooseeyaa.
Dareen la'aan istaroogga qoyan, uumiga qoyan ama qadar yar oo dareere ah ayaa soo gala mashiinka, ma jirto khatar shoog dareere ah.
⑥ Waxaa lagu hawlgali karaa saamiga cadaadiska sare.
⑦Sida wax ku ool ah istaroogga waa la bedeli karaa iyadoo la kaashanayo slide valve, iyo awoodda qaboojinta stepless waxaa laga beddeli karaa 10 ilaa 100%.
Qalabka daaweynta saliidda ee adag ayaa loo baahan yahay, waxaana loo baahan yahay qalab sida kuwa kala-soocida saliidda iyo qaboojiyeyaasha saliidda leh saameyn wanaagsan oo kala soocid ah ayaa loo baahan yahay. Sawaxanku aad buu u weyn yahay, guud ahaan waxa uu ka sarreeyaa 85 decibels, waxaana loo baahan yahay cabbirada daboolida dhawaaqa.
Marka la barbardhigo nooca piston-ka, nooca centrifugal wuxuu leeyahay xawaare sare, mugga hawada weyn, xirashada farsamada yar, qaybo yar oo xiran, dayactir fudud, waqti dheer oo shaqo oo joogto ah, gariir yar, hawlgal xasilloon, shuruudaha aasaasiga ah ee hooseeya, iyo awoodda cutubka marka mugga hawada waa weyn yahay. Cutubku miisaankiisu waa khafiif, cabbirkiisu yar yahay, wuxuuna ku fadhiyaa meel yar. Mugga gaaska waxaa si tartiib tartiib ah loogu hagaajin karaa inta u dhaxaysa 30% ilaa 100%. Way sahlan tahay isku-buufinta iyo ceejinta marxaladaha badan. Waxay buuxin kartaa shuruudaha hababka kiimikada qaarkood wayna fududahay in la xaqiijiyo automation. Mashiinnada baaxadda leh waxaa si toos ah u wadi kara marawaxadaha uumiga ee warshadaha dhaqaale, kuwaas oo faa'iido dhaqaale u leh shirkadaha leh uumiga kulaylka qashinka. Khasaarooyinku waa: inta jeer ee buuqa badan, isticmaalka biyaha qaboojinta oo weyn, hawlgal aan haboonayn ayaa sababi doona kor u kac.